Nayjeeriya oo cambaareysay maamuuskii ay Gini u sameysay Muuse Biixi | HalQaran.com
Nayjeeriya oo cambaareysay maamuuskii ay Gini u sameysay Muuse Biixi
Abuja (HalQaran.com) – Xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka Nayjeeriya Shehu Sani ayaa dhaleeceeyay go’aankii ay dowladda Geni ku maamuustay booqashadii khilaafka badan dhalisay ee hoggaamiyaha maamulka Somaliland Muuse Biixi ku tagay dalka ku tagay dalka Gini Konakri.
Mudane Shehu ayaa qoraal uu bartiisa Twitterka ku baahiyay ayuu ku tilmaamay casuumaadii ay dowladda Geni u fidisay hoggaamiyaha Somaliland mid ay ku dooneysay in ay aqoonsi ku siiso maamulka Somaliland ee gooni u goosadka ah.
“Waa ay ku khaldan tahay dowladda Geni iyo dowlad walba oo ku taalla Galbeedka Afrika in ay bixiso nooc kasta oo aqoonsi ah oo la siinayo maamulka gooni u goosadka ah ee Somaliland” ayuu ku yiri bartiisa twitter-ka.
Senatar Shehu Sani ayaa carrabka ku adkeeyay in qaaradda Afrika iyo dalka Nayjeeriyaba ay aqoonsan yihiin kaliya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Mudanahaan ayaa Soomaaliya u rajeeyay in khilaafaadkeeda lagu xallin doono gudaha dalka sidoo kalena ay Soomaaliya dib cagaheeda ugu istaagi doonto.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa afar maalmood kaddib markii ay dowladda Soomaaliya cabasho ka gudbisay dowladda Geni isla markaana xiriirkii diblumaasiyeed u jartay.
Dowladda Soomaaliya ayaa dowladda Geni ku eedeysay in ay soo faragalisay madaxbannaanida Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa sheegtay in la gaaray xilligii ay dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba u sheegi lahaayeen adduun weynaha in aanay wax dulqaad ah u yeelan doonin faragalin kasta oo wax u dhimeysa madaxbanaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.